Sharciga Gargaarka, Gargaarka, iyo Amniga Amniga ee dowladda dhexe ee loo yaqaan 'Coronavirus Aid', Relief, and Economic Security Act (CARES Act) ayaa u qoondeeyey lacag dheeri ah Horumarinta Beesha ee Deeqda Coronavirus (CDBG-CV) iyada oo loo sii marinayo Waaxda Guriyeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka Mareykanka (HUD) ee Gobolka ee Deeqda Horumarinta Bulshada (CDBG) ) barnaamijka ganacsiga. Maalgelinta CDBG-CV waxaa la siin doonaa Ganacsiga illaa saddex wareeg oo maaliyadeed oo kala duwan. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan wareegyada maaliyadeed ee kala duwan fadlan booqo gobolka Lacagaha CDBG-CV Page
Deeqaha Xannibaadda Horumarinta Bulshada - Coronavirus (CDBG-CV1)
Gobolka loo qoondeeyay CDBG-CV1 waa $ 7.7 milyan. Lacag ayaa la siin doonaa CDBG magaalooyin aan xaq u lahayn iyo dawladaha gobolka in lagu maalgeliyo adeegyada bulshada iyo barnaamijyada kaalmada shirkadaha yaryar; caafimaadka bulshada, wax ka qabashada xaaladaha deg degga ah, ama guryaha ku meel gaarka ah ee wax ka qabta saameynta COVID-19; iyo bixinta maamulka. Dhammaan waxqabadyada ay maalgeliso CDBG waa inay ka faa'iideystaan ​​dadka dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah ama ay buuxiyaan shuruudaha ujeedo qaran ee deg degga ah ee u baahan CDBG.
Lacag ayaa loo heli karaa magaalooyinka ay ka yaryihiin 50,000 kun oo qof oo aan ka mid ahayn barnaamijka CDBG ee degmooyinku xaq u leeyahay ee CDBG; iyo gobolada leh in kayar 200,000 oo dad ah marka laga reebo magaalooyinka xaq u yeelashada iyada oo loo marayo nidaamka dalabka internetka ee ZoomGrants. Macluumaadka qaybinta maalgelinta iyo macluumaadka tilmaamaha arjiga fadlan booqo gobolka Lacagaha CDBG-CV .
Deeqaha Xannibaadda Horumarinta Bulshada - Coronavirus (CDBG-CV2)
Bishii Meey 11, 2020, HUD waxay ku dhawaaqday wareegga labaad ee maalgelinta Coronavirus. Gobolka loo qoondeeyay CDBG-CV2 waa $ 23 milyan. Abaalmarintan waxaa lagu bartilmaameedsanayaa bulshooyinka nugul. Faahfaahin dheeraad ah ayaa lagu dari doonaa maadaama hagitaan dheeraad ah ay bixiso HUD.
Deeqaha Xannibaadda Horumarinta Bulshada - Coronavirus (CDBG-CV3)
Qoondaynta saddexaad ee Xeerka DARYEELKA ayaa HUD loo qaybin doonaa gobollada iyo unugyada dawladda hoose iyada oo loo eegayo wareejinta, iyada oo la oggol yahay xoghayaha HUD, iyada oo qodobbada qaaciddada lagu qeexi doono HUD. Lama hubo in gobolka Washington uu heli doono qayb ka mid ah qoondadan.